एक युग १४ वर्षमा मृत्युको मुखबाट फर्केर आएका छाेरालाइ देख‍ेर आमाको मुहारमा छाएको खुसी – Shirish News
एक युग १४ वर्षमा मृत्युको मुखबाट फर्केर आएका छाेरालाइ देख‍ेर आमाको मुहारमा छाएको खुसी
माया मारिसकेको छोरा घर फर्किँदाको खुसी उनको मुहार प्रष्ट देखिन्थ्यो ।अमरदेवीले आरती गरिन्, अनि उमेशको हातमा ५० रुपैयाँ राखेर मुख हेरिन् ।उनी उमेशको स्वागतमा दैलोमा कलश राखेर बसेकी थिइन् ।
मृत्युको मुखमा पुगिसकेको छोरा घर फर्किदाको खुसी धनुषाको कमला नगरपालिका–५ पर्साकी ७५ वर्षीया अमरदेवी यादवलाई जति अरुलाई कमै थाहा होला ।
खाडी मुलुक साउदी अरेबियामा मृत्युदण्डका सजाए पाएर पनि बाँचेर स्वदेश फर्केका धनुषाका उमेश यादव र उनको परिवार बीच झन्डै एक युग १४ वर्षपछि आज पुनर्मिलन भएको छ ।
माघ ८ गते साउदीबाट नेपाल (काठमाडौं) आईपुगेका उमेश सोमबार यति एयरको विमानबाट जनकपुर आईपुगेका हुन् ।
साउदी अरेबियामा मृत्युदण्डबाट जोगिएर स्वदेश फर्किएका धनुषाका उमेश यादवले १४ वर्षपछि आफ्ना श्रीमती र छोराहरुलाई अंकमाल गर्न पाउँदा खुशीको सीमा थिएन र खुशीको आँसु सबैको आँखाबाट छछल्कि रहेको थियो ।
वर्षौ पछि जनकपुर विमानस्थलमा ओर्लिएका उमेशले श्रीमती र परिवार देख्दा आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन्। श्रीमती सञ्जु पनि आफूलाई सम्भाल्न सकिनन् उनि पनि भावविह्वल बनिन्। छोराहरुको आँखामा पनि वर्षौ पछि बुवालाई भेट्न पाउँदा खुशीको आँसु त्यसै बग्न थाल्यो ।
रामायणमा श्रीरामले १४ वर्षको वनवास काटेर फर्के झै १४ वर्ष पछि मृत्युबाट जोगिएर फर्केका उमेशलाई देखेर वर्षौ देखिको पर्खाइमा बिताएकी उमेशकी श्रीमती सञ्जु आफ्ना दुई छोराहरु कमलेश र हितेशसँगै जनकपुर विमानस्थलमा उनलाई उनि आउने प्लेनको बाटो पर्खिरहेका थिए। उनीसँगै उमेशका भतिजाहरु, जेठो साढु राजकरण यादव, सासू दुर्गीदेवी र आफन्तजन समेत उमेशको स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका थिए।
उमेश आउनु भन्दा अघि नै विमानस्थल पुगेकी श्रीमती सञ्जुले भनिन्, ‘श्रीमान् मृत्युको मुखबाट फर्केर आइपुग्नुभयो, योभन्दा ठूलो खुशी संसारका अरु केही हुनै सक्दैन।’ अब श्रीमानलाई कतै जान नदिएर उनिसँगै बसेर छोराहरुलाई पढाई लेखाई ठूलो मान्छे बनाउने उनको अबको योजना छ।
वृद्ध आमा र विरामी बुवालाई हेरेर भक्कानो फुट्यो उमेशको
साउदी अरेबियाबाट मृत्यूको मुखबाट बचेर आफ्नो घर आएपछि उमेश आफ्ना वृद्ध आमा र विरामी बृद्ध वुवालाई हेर्दै भक्कानो फुटेर आयो उमेशको ।
स्वदेश फर्किएपछि पनि झण्डै एक सातापछि मात्र आफ्ना परिवारलाई भेट गर्न पाएको छ । विगत १४ वर्षदेखि साउदीको जुबेल जेलमा रहदै आएको तथा फाँसीको सजाय समेत सुनेर बसेका उमेश आज आफ्नो परिवारसँग भेट गर्दै संसार जितेर फर्केका महुसस गरे ।
आफ्नो घर पुगे लगत्तै उनकी आमा आफूलाई सम्हाल्न सकिनन् भने गाउँ टोलका स्थानीयहरुले समेत आफ्नो आँसु थाम्न सकेनन् । बाँच्ने आश नै मरिसकेको उनका परिवार र गाउँलेहरु उमेश घर आउँदा एक सपना जस्तै भएको भनेर स्थानीयहरुले बताए ।
बुवाको मुख समेत नचिनेका कान्छो छोरो
सन् २००६ मा साउदी अरेबिया जाँदा उमेश कान्छो छोरा हितेश जन्मेको जम्मा १७ दिन मात्र पुगेको थियो । जेठा छोरा कमलेश यादव चार वर्ष पुगेका थिए। दुबै छोराहरु बुवालाई अंगालो हाल्दै खुशीको आँसु निकै सम्म झारिरहे ।
उमेश जेल परे पछि श्रीमती सञ्जुको माइत बास
उमेशको घर धनुषाको कमला नगरपालिका ५, पर्सामा हो । ससुराली सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका ७, मरेवा टोल हो। उमेश जेल परे पछि सञ्जु माइतमा ८ वर्ष बसिन् । छोराहरु दुवैलाई माइत मै लगिन्। सञ्जु त्यतिबेलाको अवस्था सम्झिन्छिन्, ‘सासूससुराले बस्छौ भने बस माइत जान्छौ भने जाऊ भने, त्यसपछि छोराहरु लिएर माइत गएँ।’
माइतमा ८ वर्ष बसेपछि छोराहरुलाई पढाउन समस्या भएपछि त्यहाँबाट उनि धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका महेन्द्रनगरमा आफ्नो भिनाजु राजकरण यादवको सरणमा आई पुगिन् र ज्याला मजदुरको काम गर्दै दुवै छोरालाई पढाउन थालिन्।
अहिले जेठो छोरा १७ वर्ष र कान्छो १३ वर्षका भए । कमलेश अहिले कक्षा ८ मा महेन्द्रनगर कै प्रगति शिशुसदन बोर्डिंग स्कुलमा पढ्छन्। हितेशचाहिँ सरस्वती बोर्डिंग स्कुलमा कक्षा ३ मा पढिरहेका छन्।
कहिलेकाही जेलबाटै चोरेर फोनमा कुरा
करिब १४ बर्षदेखि साउदीमा जेल जीवन विताई रहेका उमेशले आफ्नी आमालाई कहिलेकाही चोरेर जेलबाटै फोनमा कुरा गर्थे । उमेश फोनमा मात्र ५—७ सेकेन्ड जति कुरा हुन्थ्यो उनले आफू छिट्टै घर आउँछु आमा, छिट्टै आउँछु भन्न नपाउँदै फोन काटिन्थ्यो । छरछिमेक र आमाबुवाको आँखा त्यति बेला रसाएर धुरुधुरु रुनु बाहेक अन्य कुनै माहौल हुँदैन्थ्यो त्यतिबेला ।
धनुषाको साबिक माचि झिटकैया वडा नं. ४ तथा हाल कमला नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने आमा कुमैर देवी र बुवा भोला यादवको साईला सन्तान हुन उमेश । गरिबीले सताएपछि विदेशिएका उमेशले सउदीको जिलादीन कम्पनीमा ६ महिना काम गरे । त्यसपछि यो दुर्घटना हुन पुग्यो र उनि जेल जानु पर्यो ।
४ दाजुभाई रहेका उमेशबाट यस्तो घटना भएपछि सबभन्दा कान्छो भाई दिनेश यादव कहाँ भागेर गए, उमेशका भाई दिनेश पनि सउदी मै वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बेला उत्ता उमेशको भाई दिनेशलाई पनि पक्राउ गरी सउदी प्रहरीले ६ महिना जेलमा राखे ।
६ महिनापछि कम्पनीको पहलमा हिरासतमुक्त भएका दिनेश पुनः आफ्नै गाउँ पुगेर खेतीपाती गरेर अहिले धारापानी कुम्हरामा कामकाज गरी जीवन धानेका छन् र दाजु उमेशको हालात देखेर पुनः कहिल्यै विदेश नजाने प्रतिज्ञा पनि गरेका छन् ।
उमेशका जेठो दाजु शम्भु यादव, महिला दाजु लाले यादव, र सबभन्दा कान्छो भाई दिनेश यादव रहेका छन् । ४ दाजुभाईमा २ कठ्ठा जमिन मात्र थियो, सउदीमा उमेशलाई सजाय र १२ बर्षदेखि घर नफर्केपछि ३ दाजुभाईले बाँडेर उमेशको भागको सबै बेचबिचखन गरी सकेको अवस्था छ ।
सउदी जेलमा विगत १४ बर्षदेखि बन्द रहेका धनुषाका उमेश यादवको मुद्दा बारे सुनुवाई हुने बारे सउदी अरबमा सजायबारे विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आएपछि जागरुक भएका सरोकारबालाहरुले उमेशबारे विस्तृत खोज्य व्यस्त भए । यसैक्रममा समाजिक अभियन्ता एवं तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य सरोज रायले उमेशको मुद्दाप्रति चासो लिंदै विस्तृत खोजतलासमा लागे ।
सउदीमा उमेशसँग भएको दुर्घटना र १२ बर्षदेखि जेलमा बन्द उमेशको बारेमा प्रकाशित समाचार तथा यथार्थ बारे पहल थाले । रायले विभिन्न सँचार माध्यमहरुमा उमेश बारे आएको समाचारप्रति टिप्पणी गर्दै घाँटी काटेर झुण्डयाउने, ब्लडमनी ७० लाख दिए मात्रै उमेश घर फर्कन पाउने जस्ता समाचारहरु आए पछि निकै चासो लिएर सबै कुरा पत्ता लगाउन तर्फ लागे ।
समाचारलाई आधार मानी सरोकारवालाहरुले उमेशको मुद्दामा विशेष ध्यानाकर्षण देखाएको छ भने देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पनि हरेक प्रकारको सहयोग गर्नको लागि तयार भए ।
उमेशको घटनाबारे समाजिक अभियन्ता एवं तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य सरोज राय आफनो फेसबुकमा त्यतिबेला जानकारी संकलन गरी यसरी लखे ।
साउदी जेलमा बन्द उमेश यादववारे पाएको जानकारी ः
सन् २००६ मा धनुषाको साविक माची झिटकैया–४ तथा हाल कमला नगरपालिका–३ बस्ने आमा कुमरी देवी र बुबा भोला यादवको साइला सन्तान उमेश यादव गरिबीबाट मुक्त हुन सउदी अरब पुगेका थिए ।
काठमाडौँमा रहेका सुभास मेनपावर कम्पनिबाट उनि लेवरको काममा साउदी बिनलादीन कम्पनीमा पुगेका थिए ।
सउदी पुगेका २ महिना पछि नै उनि संग काम गर्ने पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद वाजिर संग उमेशको झडप हुन्छ र त्यसमा वाजिरको मृत्यु हुन्छ ।
त्यस पछि उमेशलाई पक्राउ गरि र जुबैलको जेलमा राखियो । यस्तो घटना भएपछि भाइ दिनेश त्यहाँबाट भागे तर पछि उनलाई पनि पक्राउ गरी सउदीको जेलमा छ महिना राखे । छ महिनापछि कम्पनीको पहलमा हिरासत मुक्त भएका दिनेश पुनः आफ्नै गाउँ फर्के ।
जुबैलका स्थानीय अदालतले नोभेम्बर ११ मा मा उमेशलाई दोषी करार गरि मृत्यु दण्डको सजाय सुनायो । मृत्यु दण्ड दिएको एक दुई दिन पछि सउदी प्रशासनले सउदी अरब स्थित नेपाल राजदुतावासलाई यस वारे अवगत गराउँछ र दूतावाससंग उमेश वारे थप जानकारीको मांग गर्छ तर त्यस बेला दुतावास संग कुनै जानकारी हुँदैन। केहि दिन पछि मात्र दुतावासले उमेश यादव वारे थप जानकारी संकलन गर्न सफल हुन्छ।
२०११ मा सउदीको लागि नेपाली राजदुत रहेका उदय राज पाण्डेले उमेशलाई बचाउन पहल सुरु गर्छ । लगभग एक वर्ष सम्म सउदी अधिकारी र पाकिस्तान दुतावाससंग उमेशलाई बचाउन पहल गरिन्छ र जनवरी २०१२ मा पिडित परिवारले मृत्यु दण्ड दिनु बाट उमेशलाई माफी दिन्छ । तत्कालिन राजदुत उदय राज पाण्डेले यसको लागि सउदी अधिकारी र पाकिस्तान दुतावासका अधिकारीलाई धन्यवाद दिन्छ ।
पिडित परिवारबाट माफी पाएपछि उमेशको मृत्यु दण्ड रोकिन्छ र उनलाई जेल कैदमा राखिन्छ। यता पिडित परिवारले मांग गरेको अनुसारको ब्लडमनी उपलब्ध गराउन तत्कालिन राजदुत उदय राज पाण्डेले पहल गर्ने समाचार घ व्बलगबचथ द्दण्ज्ञद्द, ब्चबद ल्भधक मा प्रकाशित भएको थियो ।
यस पछि के हुन्छ? राजदुतको पहल काँहा सम्म पुग्छ वारे जानकारी लिन कोशिस गरियो तर खासै कतै केंहि भेटिदैन । यता नेपाल स्थित केहि मेडियामा अचानक उमेश वारे समाचार प्रकाशित हुन्छ । समाचारमा सउदी अदालतले चांडै उमेशको टाउको काटेर २४ घण्टा झुण्ड्याउने आदेश दिएको छ र पाकिस्तानी नागरिकको परिवारले ब्लडमनी रु ७० लाख माग गरेको बुझाउन सके र अदालतमा मृतकका परिवारले छोडदिन भनेपछि उमेशलाई आममाफी हुने संभाबना छ भनेर उल्लेख गरिन्छ ।
अभियन्ता सरोज रायको घांटी काटेर झुण्डयाउने खबर सुनेर मन एकदम दुखि हुन्छ र उमेशलाई बचाउन पहल सुरु गर्छ । नेटबाट विभिन्न जानकारीहरु एकत्रित गर्छ उनले । यहि दौरान सउदी स्थित नेपाली दुतावास संग सम्पर्क पनि गर्छन् ।सउदीको लागि नेपाली राजदुत रहेका महेन्द्र सिंह संग विस्तारमा कुरा हुन्छ र उनले गराएका जानकारी सुनेर आश्चर्य हुन्छ।
किनभने नेपाली मेडियामा घांटी काट्ने र ब्लडमनी रु ७० लाखको कुरा एकदम गलत रहेका जानकारी राजदुतले गराए।
राजदुतको घर पनि उमेशको गाउँबाट नजिक रहेको छ । जेलबाट उमेशले निरन्तर महिने पिच्छे राजदुतलाई फोन गरिरहेको छ।
जुबैलको स्थानीय अदालतले उमेशको मुद्दामा सुनवाई गरेको छ जसमा नेपाली दुतावासबाट पनि पदाधिकारी गएका वारे राजदुतले जानकारी गराए।
अगाडी राजदुत सिंहले पाकिस्तानी पिडित परिवार धेरै साल देखि सम्पर्क विहिन रहेकोले ब्लडमनी दिने सम्भावना कम रहेको र सउदी अदालतले पनि उमेशलाई छोड्ने मन बनाएको जानकारी दिए
यस्तो छ उमेशको कहानी
मेनपावर कम्पनीलाई एक लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाएर उमेश २००६ मा साउदी अवर पुगेका थिए । काम थियो भवन निर्माण, तलव थियो साढे पाँच सय रिअल । तर उनले तलव बुझ्न नपाउँदै जेल जानु परो ।
उमेश साउदी पुगेको एक महिना १२ दिन पुगेको थियो । १२ औं दिनको चर्को घाममा उनले घरमा रङ लगाउँदै थिए । उमेशसँगै थिए उनीभन्दा सिनियर पाकिस्तानी मजदुर । उमेशले नम्बर प्लेट टिप्दै थिए, भ¥याङ भुइँमा झ¥यो ।
पकिस्तानीले एक मुक्का बजाइदिए । उमेशको पनि २५ वर्षे जोस । छेउमा पाइप थियो । उचालेर चार पटक हिर्काए । उमेशलाई चार दिनपछि पक्राउ गरिन्छ ।
यो घटना भएको १६ दिनपछि अस्पतालमा पाकिस्तानी नागरिकको मृत्यु भयो । रियाद जेलमा चार दिन राखेर उनलाई जुवेल सेन्टर जेल पु¥याइयो, जुन जेलमा विवेक एक वर्ष अघिदेखि नै थिए । तर जब पाकिस्तानीको मृत्युको खवर सुने । उमेशको होसहवास उड्यो । होसहवास उड्नु पनि स्वाभाविक नै किनभने हत्याको आरोप लागेकालाई मृत्युदण्ड नै सजाए दिन्छ ।
उमेशले भने, ‘दुई वर्षसम्म बेहोसी अवस्थामा नै थिएँ । नेपाल फर्किन्छु फर्किन्नँ केही थाहा थिएन । न खाना ठेगान, न सुत्ने ठेगान । एउटै बेडमा चार जना पालो पालो गरि सुत्नुपर्दथ्यो, दिमागका मृत्यु बाहेक अरु केही कुरा आउँदैनथ्यो । अनि सिलिपिंग ट्याबलेट खाएर सुत्नु पर्थ्यो ।
एक वर्षपछि उमेशलाई अदालतमा हाजिर गराइयो । केही सोधेजस्तो ग¥यो र कागजमा हस्ताक्षर गरायो । अनि फेरि जेल ल्याइपु¥यायो । अर्को एक वर्षमा फेरि अदालतमा हाजिर गरायो । अदालतमा केही सोध्ने बाहेक केही काम भएन । बरु उनले त्यहाँ अदालतमा नेपाली भेटाए, जसले भाषा अनुवादको काम गर्थे ।
उमेशले भने, ‘हजुर, मेरो घरमा खबर पु¥याइदिनु न ! मसँग मोवाइल छैन ।’
उनले कतारका एक नेपालीको नम्बर दिए अनि घरमा सम्पर्क गराइदिए । दुई वर्षपछि उमेशका परिवारका सदस्यहरुले थाहा पाए कि छोरा जेलमा छ । थाहा पाएर के गर्नु ? भगवानसँग प्रर्थना गर्नु बाहेक गर्नसक्ने केही थिएन ।
उमेशलाई पनि परिवारका सदस्य र पत्नीसँग कुरा गर्न मन थियो तर घरमा मोवाइल छैन । उनका एक जना अंकल गाविस सचिव । उनै अंकलले चार वर्षपछि श्रीमतीसँग कुरा गराइदिए । श्रीमतीले रुँदै सोधिन्, कसरी पुग्नुभयो तपाई जेलमा ?
उमेशले भने, ‘मलाई रुन मात्र आयो र तैपनि आफूलाई सम्हाल्दै आँशु पुछ्दै आफ्नो धर्म निर्वाह गरे, ‘नआत्तिनु म एक महिनापछि फर्किन्छु ?’ उमेशलाई श्रीमतीसँग कुरा गर्ने धित मरेकै थिएन । तर उनको अगाडि आएर ठिंग प्रहरी उभियो । र, उसले हत्कडी लगाएर कालो कोठामा पुनः लगेर हालिदियो ।
जेलमा बस्दा उमेशसँग मोवाइल हुने कुरा भएन । उनका अनुसार जेलभित्र चोरीको मोवाइल किन्न पाइन्थ्यो तर धेरै महंगो । विदेश जाँदा लागेको ऋण त तिर्न सकेका छैन, कसरी मोबाइल किन्नु ? त्यसैले जेलमा साथीको मोवाइल लिँदै बेला मौकामा घरमा फोन लगाउथेँ उमेश ।
दिन वित्दै गयो, उनले हरेश खाँदै गए । उपाय लाग्छ कि भनेर मृतक पकिस्तानीको परिवारसँग पनि सम्पर्क गरे । दूतावासमा लगातार फोन गरिरहे । तर कसैले उनलाई सहयोग गरेन । त्यसैले जेलमा ट्याबलेट खाने, तीन दिनसम्म लड्ने गरेर जुवेर जेलको जीवन गुजार्दै थिए ।
२०१८ को एकदिन जनरल अदालतले उमेशलाई फाँसीको सजायँ सुनाईयो । त्यो पनि पहिला खुट्टा र हात काट्ने अनि घाँटी । किनकी उनलाई हरप्पा मुद्दा लागेको थियो । उमेशले संसार बिर्सिए । भन्छन्, ‘आँखा अगाडि अन्ध्यारो छायो, दिमाग शुन्य भयो । मृत्यू ध्रुवसत्य हो, तर पूर्वघोषित मृत्युको खवरले मानिस कुन अवस्थामा पुग्छ होला ? यसलाई म शव्दमा वर्णन गर्न सक्दिन ।’
उमेश अब म मर्दैछु भन्ने खवरले जति आत्तिएका थिए, देश र नेपाली दूतावाससँग त्यत्तिकै आक्रोशित पनि थिए । उमेशले सबै आक्रोश भिडियोमा पोखे, सहयोगको याचना गरे अनि कसैलाई फेसबुकमा राख्न लगाए ।
भिडियो भाइरल भयो । नेपालीहरु सहयोग गर्न चाहे । सरोज रायले पनि जनकपुरको संचारमाध्यम मार्फत समाचार पढे । मनमनै सोचे, यो मान्छेलाई छुटाउन पहल गर्छु ।’
सरोज राय जोडतोडको साथ उमेशलाई बचाउने अभियानमा लागे । सहयोगहरु जुटाउन थाले, साउदी पुगेर नेपाली दूताबासको सहयोग लिए, न्यायाधीशशसँग कुरा राखे । राय फेरि मृतक पाकिस्तानी नागरिकको परिवार भेट्न पाकिस्तान पनि पुगे । र, माफिनामा बनाए । सरोज भन्छन्, ‘म तीन पटकसम्म पाकिस्तान पुगेँ । पाकिस्तानी वकिल लगाएर परिवारलाई मनाएँ । अनि वकिल मार्फत ब्लड मनीको तीस लाख रुपैयाँ पीडितको परिवारलाई उपलब्ध गराएँ ।’
सरोजले भने, ‘यो तीस लाख मलाई मनकारी नेपालीहरुले जुटाइदिएका थिए ।’
सरोजको दुई वर्ष लामो प्रयास माघ ८ गते विहान नौ बजे सफल भयो, जब उमेश त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सकुशल ल्याण्ड भए । उमेशले भने, ‘जेलका साथीहरुबाट पचास —सय रियाल सहयोग उठाएर नेपाल आएको हुँ ।’
उमेशले जेलमा आफूसँगै भएका पाँच जना नेपालीलाई छोडेर आएको बताए । केही दुर्घटनाका मुद्दामा जेल बसेका छन् त कोही के मुद्दामा । उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ जेल परेपछि कसैले थाहा पाउँदैन । सहयोग गर्ने मान्छे भएन भने या त जीवनभर जेलमा सड्ने हो, या फाँसीमा झुण्डिने हो ।’
उमेशले जुवेल जेलमा १२ जनाभन्दा बढी नेपाली रहेको बताए । भाषाकै कारण कतिपय निर्दोष नेपाली जेलमा छन् ।
यादवलाई सन् २००६ मा पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद लतिफ वासिरको हत्या गरेको अरोपमा जुवेलका जेनलर कोर्टले १५ अप्रिल २०१८ मा मृत्यु दण्डको सजाय सुनाएको थियो। यादव सन् २००६ मा साउदी पुगेका थिए।
विवादको क्रममा पाकिस्तानी नागरिकको मृत्यु भएपछि उमेशलाई प्रहरीले हत्या आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। उमेशलाई मृत्यु दण्डको सजायको खबर आएपछि जनकपुरका समाजिक अभियन्ता सरोज रायले जीवन रक्षाको लागि अभियान चलाएका थिए।
अभियन्ता रायले दुई वर्षदेखि ब्लडमनीको लागि चन्दा संकलन गरी परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासको सहयोगमा मृतक पाकिस्तानीको घरमा पुगेर उमेशको जीवनरक्षाको निम्ति अनुरोध गरेका थिए। उनले चन्दा संकलन गरी पाकिस्तानी मृतक परिवारलाई ३० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ ब्लडमनी समेत दिए।
यादवको जीवन रक्षाको लागि विगत २ वर्षदेखि अभियान चलाएका जनकपुरका समाजिक अभियन्ता सरोज रायले विमानस्थलमा स्वागत गरे।
स्वदेश फर्किएपछि पनि झण्डै एक सातापछि मात्र उमेशले आफ्ना परिवारलाई आज भेट गर्न पाएको छ ।
सोमबार (आज) अभियन्ता सरोज राय उनलाई लिएर घर पु¥याएका हुन् । नेपाल आएको एकसाता रायले आफू कहाँ नै राखेका थिए
मृत्युको मृखबाट बाँचेर आएका उमशेले अव स्वदेशमा नै बसेर रोजगारी गरि छोराहरुको पठन पाठन सहित श्रीमतिलाई उचित सम्मान तथा आमा बुबाको सेवा गर्ने बताएका छन् ।
आफूलाई मृत्युको मुखवाट जोगाएर घर फर्काउने सवै पक्षलाई धन्यवाद दिदै आफूसंगै जेलमा मृत्यु दण्डका सजाय पाएका अरु नेपालीको ज्यान रक्षाका लागि नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावालीसंग आग्रह गरेको उमेशले बताए ।
गाँजालाई वैधानिक मान्यता दिन माग गर्दै संसदमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता